Budata Through The Fog APK maka Android
Budata Through The Fog
Free Budata maka Android (109.00 MB)
Budata Through The Fog,
Site na Fog bụ mmepụta ihe na-atọ ụtọ nke na-ebu ahịrị egwuregwu agwọ ama ama nke hapụrụ akara ya na oge. Ị na-achịkwa agwọ na-aga nihu site na ịbịaru zigzag na egwuregwu ahụ, nke na-enye ohere igwu egwu naanị ya ma ọ bụ gị na ndị enyi gị nọ na mpaghara ma ọ bụ na otu ngwaọrụ. Ebumnuche gị bụ ịga nihu dịka o kwere mee na-emetụghị ihe mgbochi ahụ aka.
Na egwuregwu gam akporo, nke na-enye ihe ngosi dị mfe, nke na-atọ ụtọ na nke na-adịghị agwụ agwụ, ị na-agbalị ịga nihu site nife ihe mgbochi dị ka agwọ. Dị ka ị pụrụ iche nechiche, ihe mgbochi ndị nwere oghere nke nanị agwọ nwere ike ịgafe bụ nanị ihe na-eme ka egwuregwu ahụ sie ike. A naghị edozi ihe mgbochi; Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, ha na-agagharị ka ha na-abịaru nso, mgbe ụfọdụ, ha na-apụta mgbe ị na-atụghị anya ya, na echiche ha na-ele anya na-eme ka ọ sie ike ịga nihu, ha gbakwunyere mmasị na egwuregwu ahụ.
O zuru ezu imetụ isi ihe ọ bụla nke ihuenyo ahụ aka iji chịkwaa agwọ na egwuregwu ahụ. Ebe ọ bụ na ị nwere ike ịga nihu naanị site na ịbịaru zigzag, ị ga-emewanye ike nke mmetụ ahụ na mpaghara dị warara.
Through The Fog Ụdịdị
Nha faịlụ: 109.00 MB
Mmepụta: BoomBit Games